यी नर्स जो दसैंको टीकामा १२ वर्षदेखि बिदा बसेकी छैनन् ! – Saurahaonline.com
यी नर्स जो दसैंको टीकामा १२ वर्षदेखि बिदा बसेकी छैनन् !
सौराहा अनलाइन | २०७६, २२ आश्विन बुधबार
काठमाडौँ– हरेक वर्ष दसैंका बेला १० वर्षअघिको घटना सम्झिन्छन्, नर्स इन्द्रलक्ष्मी श्रेष्ठ। त्यो घटनाले घरी उनलाई हाँसो उठ्छ भने घरी झस्काउँछ। त्यतिबेला उनी वीर अस्पतालको इमर्जेन्सी वार्डको अब्जरभेसनमा काम गर्थिन्। नजिकै घर भएकाले उनले कहिल्यै पनि दसैंमा बिदा पाउँदिन थिइन्।
उनको नाइट ड्युटी थियो। एक जना घाइते बिरामी इमर्जेन्सीमा आएका रहेछन्। उनको खुट्टा छ्याकछ्याक काटिएको रहेछ। ‘माइनर ओटी’ त्यहीं भएकोले ड्युटीमा रहेका चिकित्सकले सामान्य शल्यक्रिया गरिदिएका रहेछन्, उनको घाउको।
इन्द्रलक्ष्मी पनि ड्युटीमै भएकाले डाक्टरलाई हड्डीमा चोट लागेको, नलागेको सोधिन्। डाक्टरले हाँस्दै भने– श्रीमतीले मायाले काटिदिएकी रहिछिन्, घाउ गहिरो छैन। पछि उनी आफैंले बिरामीसँग घटनाका बारेमा बुझ्दा थाहा पाइन्– श्रीमतीले दसैंको लागि मासु ल्याउनु भनेर पैसा दिएकी रहिछन्। श्रीमान् मासु नल्याई रक्सी खाएर घर फर्केछन्। त्यही रिसले श्रीमतीले छ्याकछ्याक गरेर श्रीमान्को खुट्टा काटिदिएकी रहिछन्। जुन घटना इन्द्रलक्ष्मी आज पनि सम्झिन्छन्।
इन्द्रलक्ष्मीले दसैंका बेला सम्झने अर्को घटना पनि छ, जसले उनको आङ सिरिङ्ग हुन्छ। उनी सानै थिइन्। नेवार समुदायले भक्तपुरबाट राँगो ल्याएर मार्ने चलन थियो। दसैंमा राँगो ल्याएर मार्ने क्रममा फुत्किएर भागेछ। घाइते राँगोले गाउँका सबै मानिसलाई लखेटेको थियो रे। भाग्ने क्रममा रागोले केही मान्छे घाइते भएका थिए रे। ‘म र आमा चाहिँ घरभित्र लुक्यौं, हामीलाई केही भएन, आज पनि यो घटना सम्झँदा डरलाग्छ,’ उनले विगत सम्झिइन्।
२०६४ सालमा १८ महिना परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालमा काम गरिन् उनले। त्यहाँ काम गर्दा दसैंको टीकाको दिन राति ड्युटी परेको थियो। त्यो बेलामा एक रात अस्पतालमा ५० भन्दा बढी बच्चा जन्मिएका थिए। ‘एकै रातमा त्यति धेरै बच्चा जन्मिएको मेरो करियरको पहिलो घटना थियो,’ उनले आश्चर्य व्यक्त गर्दै भनिन्, ‘मैले यस्तो सोचेकी थिइनँ, एक रातमा यति धेरै बच्चा जन्मिछन् भनेर।’
अहिले उनी वीर अस्पतालको आइसियु वार्डमा कार्यरत छिन्। वीर अस्पतालमा काम गर्न थालेको १२ वर्ष भयो। ७ वर्ष इमर्जेन्सी र ५ वर्ष आइसियु गरी १२ वर्ष काम गर्दा उनले अहिलेसम्म दसैंको टीकाको दिन बिदा पाएकी छैनन्। हरेक वर्ष ड्युटी सकेर उनी टीका थाप्न जाने गर्छिन्।
पाँच वर्षको आइसियको अनुभवमा अघिपछिको तुलनमा दसैंमा आइसियुमा बिरामीको चाप निकै बढ्ने गरेको उनको अनुभव छ। ‘घरका कोही सदस्य बिरामी परे आफन्तहरुले चाडबाड छेकिने डरले दुईचार दिनका लागि मात्र भए पनि बचाउन सकिन्छ कि भनेर आइसियुमा राख्न ल्याउँछन्,’ उनले भनिन्।
चाडबाडको समयमा आइसियुमा धेरै बिरामीको मृत्यु पनि हुने गरेको उनले बताइन्। सबैले चाडबाड मनाउँदै गर्दा अस्पताल आउने बिरामी र तिनका कुरुवा देखेर उनलाई नरमाइलो लाग्छ। बिरामीको मृत्यु हुँदा आफन्त जत्तिकै पीडा इन्द्रलक्ष्मीलाई पनि हुन्छ।
सानो हुँदा आमाले बजार लगेर नयाँ लुगा छानेर किनिदिने भएकोले दसैं उनका लागि सबैभन्दा रमाइलो पर्वमा पथ्र्यो। झन् दसैंका बेला विद्यालय एक महिना बिदा हुने भएकाले पनि बिदामा हातमा चुरा बजाउँदै गाउँ घुमेको सम्झना पनि उत्तिकै आउँछ। दसैंमा पिङबाट उत्रनै मन लाग्दैन थियो उनलाई। नेवार समुदायमा दसैंमा आफ्नो घरमा मात्र टीका लगाइने भएकोले टीकाको भोलिपल्टबाट मात्र रमाइलो लाग्थ्यो उनलाई।
‘दसैंको टीकाको दिनभन्दा अरु दिन रमाइलो हुन्थ्यो। आफन्तले भोजको आयोजना गर्दै टीका लगाउन बोलाउने गर्छन्,’ उनी भन्छिन्, ‘अहिले दसैंभन्दा तिहारमा म्हँ पूजा र लक्ष्मी पूजा हुने भएकाले तिहार विशेष लाग्छ।’
यस पटकको दसैंको टीकामा दिन पनि उनलाई बिदा छैन। उनी उक्त दिन ड्यूटीमै भेटिने छिन्। घरमा दसैंका बेला उनको देवरको विहे छ। उनले दिउँसो देवरको विहेमा घरको काममा सघाउने र राति ड्युटी गर्ने योजना बनाएकी छन्।स्वास्थ्यखबरबाट साभार